Xiaomi Mi7ကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကြိုတင်မှာယူနိုင်တော့မလား? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Xiaomi Mi7ကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကြိုတင်မှာယူနိုင်တော့မလား?
China Mobile Store က သူ့ရဲ့ အရောင်းဆိုင် အရှေ့မှာ Xiaomi Mi7ကို ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကြိုတင်မှာယူနိုင်မယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ရှောင်မီဟာ မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ Mi7ကို တရားဝင်ကြေညာမယ်လို့ သတင်းထွက်ထားတဲ့အတွက် ယခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိနေပါတယ်။
ရှောင်မီကတော့ Mi7ကို တရားဝင် မကြေညာသေးတဲ့အတွက် ကြိုတင်မှာယူခွင့် ပြုမယ့် အချိန်ကိုလည်း မပြောကြားသေးပါဘူး။ Mi7ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဟာ မကြာခင်က Geekbench ၀က်ဆိုက်မှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်မှ သတင်းအချက်အလက်များအရ Xiaomi Mi7မှာ ၅.၆၅ လက်မ Full HD+ Display တပ်ဆင်ထားပြီး အခုခေတ်စားနေတဲ့ မျက်နှာပြင် အရှည် ဒီဇိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 16MP Camera ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ထည့်သွင်းထားမှာတော့ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ Mi6တုန်းကလည်း 4GB နဲ့ 6GB RAM မော်ဒယ်နှစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ Mi7မှာလည်း 6GB RAM နဲ့ 8GB RAM Models များ ထုတ်လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ 64GB နဲ့ 128GB Storage Model များ ထုတ်လုပ်ပေးထားနိုင်ပြီး ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် ပါလာနိုင်ပါတယ်။
Geekbench ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ Mi7ရဲ့ Single နဲ့ Multi-Cores ရမှတ်များဟာ အခြား Snapdragon 845 Phone များနဲ့ သိပ်ကွာခြားမှု မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ၄၇၅ ဒေါ်လာ ၀န်းကျင် ရှိနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Mi7ကို မလေ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ကွိုတငျမှာယူနိုငျတော့မလား?
China Mobile Store က သူ့ရဲ့ အရောငျးဆိုငျ အရှမှေ့ာ Xiaomi Mi7ကို ယခုလ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ကွိုတငျမှာယူနိုငျမယျလို့ ရေးသားထားပါတယျ။ ရှောငျမီဟာ မလေ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ Mi7ကို တရားဝငျကွညောမယျလို့ သတငျးထှကျထားတဲ့အတှကျ ယခုထှကျပျေါလာတဲ့ သတငျးနဲ့ ကိုကျညီမှု ရှိနပေါတယျ။
ရှောငျမီကတော့ Mi7ကို တရားဝငျ မကွညောသေးတဲ့အတှကျ ကွိုတငျမှာယူခှငျ့ ပွုမယျ့ အခြိနျကိုလညျး မပွောကွားသေးပါဘူး။ Mi7ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားဟာ မကွာခငျက Geekbench ဝကျဆိုကျမှာ ထှကျပျေါခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဝကျဆိုကျမှ သတငျးအခကျြအလကျမြားအရ Xiaomi Mi7မှာ ၅.၆၅ လကျမ Full HD+ Display တပျဆငျထားပွီး အခုခတျေစားနတေဲ့ မကျြနှာပွငျ အရှညျ ဒီဇိုငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ 16MP Camera ၂ လုံး တပျဆငျထားနိုငျပါတယျ။
Qualcomm Snapdragon 845 Chipset ထညျ့သှငျးထားမှာတော့ သခြောသလောကျ ရှိပါတယျ။ Mi6တုနျးကလညျး 4GB နဲ့ 6GB RAM မျောဒယျနှဈမြိုးကို ထုတျလုပျရောငျးခပြေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ Mi7မှာလညျး 6GB RAM နဲ့ 8GB RAM Models မြား ထုတျလုပျပေးထားနိုငျပါတယျ။ 64GB နဲ့ 128GB Storage Model မြား ထုတျလုပျပေးထားနိုငျပွီး ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈ ပါလာနိုငျပါတယျ။
Geekbench ရဲ့ စမျးသပျခကျြအရ Mi7ရဲ့ Single နဲ့ Multi-Cores ရမှတျမြားဟာ အခွား Snapdragon 845 Phone မြားနဲ့ သိပျကှာခွားမှု မရှိဘူးလို့ သိရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ တနျဖိုးဟာ ၄၇၅ ဒျေါလာ ဝနျးကငျြ ရှိနိုငျပါတယျ။
Previous articleLenovo Z5 ဟာ ဘောင်မဲ့၊ notch မပါတဲ့ မျက်နှာပြင်ပြည့်ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိ
Next articleiPhone X ထက် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနှုန်း ၃၇% မြန်ဆန်တဲ့ Samsung Galaxy S9